The chip ne microphone ngezwi T5 for BlackBerry Z30 — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry Z30 ‎ → ‎
The chip ne microphone ngezwi T5 for BlackBerry Z30
Lokhu umbhobho a PCB-50118-003 chip oguqula izwi zibe uphawu lukagesi futhi ithumela yona interlocutor yakho. izingxenye ezisele Original.
Lokhu umbhobho chip PCB-50118-003 *, oguqula izwi zibe uphawu lukagesi futhi ithumela yona interlocutor yakho. Umgomo we operation wukuthi ingcindezi umsindo kunyakaza umphumela ngezwi elincanyana ulwelwesi microphone futhi uyasijabulisa oscillations kagesi. Kusukela izinga umbhobho incike izinga zokuxhumana, kanye BlackBerry ngokwesiko inikeza abasebenzisi nge eliphakeme quality.
The chip ne microphone ngezwi ogibele Screen LCD + touch screen (isikrini) kwenhlangano ukuze BlackBerry Z30.
Uma iqembu lakho Asikuzwa, noma ukubukela disconnections ngisho emazingeni aphezulu isignali, cishe imakhrofoni idinga ukushintshwa. I isici esiyinhloko kokulimaza umbhobho umswakama. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana lilungisa umbhobho ukufunda ikhasi Ukukhipha i-microphone.
Lokhu chip setha Microphone (Microphone) T5 ngoba BlackBerry. Ngokwehlukana, umbhobho akulula ukuba balungise ngenxa yobukhulu bayo amancane, ngakho Kunconywa ukuba buyisela ngokuphelele spare okuyingxenye.
The chip ne microphone ngezwi T5 for BlackBerry Z30, Ngaphandle umbala Z30MICPCB-T2 (PCB-54003-005) ●
The chip ne microphone ngezwi T5 for BlackBerry Z30, Ngaphandle umbala Z30MICPCB-T1 (PCB-50118-003) ● ↺
Ngaphandle umbala Z30MICPCB-T2 (PCB-54003-005)
Ngaphandle umbala Z30MICPCB-T1 (PCB-50118-003)